သားသမီးတွေကို မိဘတွေက ဘာဖြစ်လို့အရမ်းချုပ်ခြယ်ကြတာလဲ? - Lifestyle Myanmar
သားသမီးတွေကို မိဘတွေက ဘာဖြစ်လို့အရမ်းချုပ်ခြယ်ကြတာလဲ?
in Family, Lifestyle, Lotaya
မိဘနဲ့သားသမီးဆက်ဆံရေးဆိုတာ အမြဲတမ်းတော့သာယာမနေပါဘူး။ စိတ်အခန့်မသင့်တိုင်း ကတောက်ကဆလေးတွေ ခဏ ခဏဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မိသားစုတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုပုံစံတွေကလည်း မတူညီကြတဲ့အပြင် ဆက်ဆံရေးကောင်းပြီး ပြီးပြည့်စုံလွန်းတဲ့ မိသားစုဆိုတာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်မိဘတွေက ချုပ်ခြယ်လွန်းတာကြောင့် ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ် လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတာမျိုး၊ အပေါင်းအသင်းတွေကြားမှာမျက်နှာငယ်တာမျိုး၊ အိမ်နဲ့တဖြည်းဖြည်းအဆင်မပြေတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ချုပ်ခြယ်တက်တဲ့မိဘတွေဆီမှာလည်း သားသမီးတွေအလွယ်တကူမမြင်နိုင်တဲ့ ဒီလိုအကြောင်းအရာလေးတွေရှိနေပါတယ်။
မိဘတွေဆိုတာ သားသမီးတွေကို ရင်နဲ့အမျှချစ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး သားသမီးတွေကို မွေးစထဲကနေ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အထိ ကျန်းကျန်းမာမာရှိအောင် အကောင်းအတိုင်းရှိအောင် ပိုးလေးလို ဥပြီး မွေးမြူလာတာကိုက ဘယ်လောက်ထိချစ်တယ်ဆိုတာ သိမြင်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့လိုချစ်လွန်းလို့လည်း ချုပ်ခြယ်မိတာပါ။ ဒီလိုမွေးလာရတဲ့ ကိုယ့်သားသမီးအတွက် စိတ်ပူပြီး စိုးရိမ်ရတဲ့စိတ်တွေကြောင့်လည်း ချုပ်ခြယ်မှုတွေဖြစ်လာတာပါနော်။
ကိုယ်ကအသက်နဲ့ရင်းပြီး ပိုးလေးလိုဥပြီး မွေးထားရတဲ့ အဖိုးတန်သားသမီးတွေရဲ့ဘဝမှာ တစ်ခုခု ခက်ခဲသွားမှာ နာကျင်စရာတွေရှိလာမှာကိုမလိုလားကြတဲ့အပြင် သူတို့တွေရဲ့ဘဝတွေကို ချောချောမွေ့မွေ့ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ကြပါတယ်။ ဒီအတွက် ပညာတတ်ဖို့ဆုံးမတာ၊ တိုက်တွန်းတာအပြင် အဆိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေကို တားမြစ်ရာကနေ ချုပ်ခြယ်တာတွေလည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
နောင်တဆိုတာ နောင်မှရတယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း ဘဝမှာ ကိုယ့်စိတ်အလိုကိုလိုက်ပြီး လုပ်ချင်တာလုပ်မိပြီးမှ နောင်တရစရာမျိုးတွေရှိလာတတ်ပါတယ်။ ဒါကို ဘဝအတွေ့အကြုံများတဲ့ မိဘတွေကသာ လောကကြီးဆိုတာ ဘယ်လိုဖြစ်ပျက်တတ်တယ်ဆိုတာကိုသိကြပါတယ်။ ဒီလိုနောင်တတွေနဲ့နာကျင်မှုတွေကို မိဘတွေက သားသမီးတွေကိုမခံစားစေချင်ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း သူတို့ရဲ့တားမြစ်ချက်‌တွေကနေ ချုပ်ခြယ်တာတွေအထိဖြစ်လာကြတာပါ။
ချုပ်ခြယ်တယ်လို့ သားသမီးတွေ ယူဆထားတဲ့ မိဘတွေရဲ့ရင်ထဲမှာလည်း နဖူးမှာစာမပါတဲ့လူယုတ်မာတွေနဲ့ တွေ့ဆုံရပြီး ဆိုးရွားတဲ့ ဘဝအတွေ့အကြုံတွေ၊ လောကရဲ့ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ဒုက္ခတွေမကြုံရအောင် တားမြစ်ရာကနေလည်း ချုပ်ခြယ်တာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ဘယ်မိဘမှ သားသမီးတွေကို လောကဓံရဲ့အဆိုးတွေနဲ့ မကြုံတွေ့စေချင်ပါဘူး။
ဖြစ်နိုင်ချေ တစ်သောင်းကိုမကြောက်ဘူး မတော်တဆတစ်ခုဖြစ်လာမှာပဲကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်း ဘဝမှာ မမျှော်လင့်ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိတက်တာကို မိဘတွေက စိတ်ပူတတ်ကြပါတယ်။ သားသမီးတွေကို ငယ်တဲ့အရွယ်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ခရီးထွက်ခွင့်မပေးတာ၊ ကားပေးမမောင်းတာ၊ ညဘက် ညဉ့်နက်တဲ့အထိအပြင်ပေးမသွားတာ၊ ပါတီတွေမသွားခိုင်းတာမျိုးက သားသမီးတွေအမြင်မှာတော့ ချုပ်ခြယ်လွန်းတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။ မိဘတွေအနေနဲ့ကတော့ ကြောက်စရာကောင်းပြီး အန္တရာယ်များလွန်းတဲ့လောကကြီးကြောင့် ကိုယ်အဖိုးတန်စောင့်ရှောက်ခဲ့ရတဲ့ သားသမီးကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ အခြေအနေတွေဖြစ်လာမှာ စိုးရိမ်တာကြောင့်ပါ။
Source – bustle, dadabhagwan